Maaga Iyo Cayda Qaawan Ma Xeelad Siyaasadeed baa Mise Masuuliyiinta Waddani Ayaa Miciin Biday | Marsa News
Maaga Iyo Cayda Qaawan Ma Xeelad Siyaasadeed baa Mise Masuuliyiinta Waddani Ayaa Miciin Biday
October 24, 2019 - Written by editor marsan
Hargeisa:(Marsanews) Mudooyinkan danbe waxa saaxada siyaasada somaliland ku cusub oo ugub ku ah, habdhaqan guracan oo masuuliyiinta xisbiga waddani ay la soo hortaagan yihiin bulshada.
Masuuliyiinta xisbiga mucaaridka ah ee waddani oo uu ka kaw yahay gudoomiyahooda Ciro, ayaa inta badan warbaahinta ka jeediya hadalo qadaf iyo meel ka dhac ah, oo aan milgaha siyaasada meelna ka soo galin, taas oo aad is odhanayso, waxa ka lumay jiheeyihii.
Taniyo wakhtigii natiijada doorashada ay ku dhawaaqeen gudigii doorashadu dabayaaqadii 2017-kii ee xisbiga waddani uu magansaday guul-darada, waxaad is odhanaysaa waddani wuu ka soo hadhi waayay.
Xisbiga mucaaridka ah ee waddani waxa aad arkaysaa in uu yahay xisbi masuuliyiintusa aanay ahayn majuur oo bisaylkii iyo qaangaadhnimidii siyaasada midna ma laha.
Ficilada ka fog anshaxa iyo asluubta siyaasada ee gudoomiyaha waddani iyo masuuliyiintiisa kale ay kaga tiraabaan warbaahinta iyagoo cay qaawan oo aan milgaha iyo dhaqanka suuban meelna ka soo galin, kula kaca qoyska madaxwaynaha oo aan iyagu cidna xil u hayn siyaasadna aan ku jirin, hadana aad moodaa in uu waddani xeelad siyaasadeed moodayo cayda iyo af-xumida uu meelkasta la taagan yahay.
Taasi waxay ka dhigan tahay oo ay minqiyaas fiican u noqonaysaa sida uu uga aradan yahay xisbigaasi fahanka erayga siyaasad iyo ku dhaqan keedaba.
kasbashada quluubta shacbiga laguma helo cay iyo af-xumo warbaahinta lala taagnaado, mana aha mid u suurtogalin karta in guul lagu gaadho facaailka caadada u ah gudoomiye ciro iyo inta ku wehelisa siyaasada xisbigiisa, oo iyaga aad moodo in si gaara laysugu soo xulay. inkastoo marka loo sii dhabogalo ayaad dareemayso inay yihiiin kuwo ay isu keentay uur-xumida iyo naca ka fogeyay qiyamkii hagaagsanaa.
Gabagabadii waxaan muran ku jirin in waddani uu yahay mid sula ka baxay xayn daabkii siyaasada oo uu saacad kastana ku sugan yahay badwayn uu ku hafanayo mawjadaheeda.
Hore ayaa loo yidhi af-xumo nabadna way kaa kaxaysaa colaadna waxba kaagama tarto, waxa iyana aan muran ku jirin in aan hogaamin umadeed lagu heli karin cay iyo deelqaaf lagula kaco dad ka bad-qaba xumaha iyo balada waddani u muuqata ee iyaga afkooda ku gaarka ah.